December 2019 - Page4of 35 -
IDOL FINAL ပွဲတက် ဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့ ဝတ်ဆင်လာတဲ့ ဝတ်စုံရဲ့ အလှဆင် ပစ္စည်းတစ်ခုခြင်းစီရဲ့ ရွှေအစစ်နဲ့ မည်သို့ပြုလုပ်ထားလည်းဆိုတာ
IDOL FINAL ပွဲတက် ဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့ ဝတ်ဆင်လာတဲ့ ဝတ်စုံရဲ့ အလှဆင် ပစ္စည်းတစ်ခုခြင်းစီရဲ့ ရွှေအစစ်နဲ့ မည်သို့ပြုလုပ်ထားလည်းဆိုတာ Myanmar Idolရဲ့ဒိုင်လူကြီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မဖြူဖြူကျော်သိန်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ရွှေဆိုင်များထဲမှာမှ ဘယ်ဆိုင်မှာမှ မလုပ်ဖူးသေးတဲ့ ထူးခြား ဆန်းပြား ထည်ဝါတဲ့ လက်ဝတ် ရတနာတွေကို ပထမဦးဆုံး ထာဝရ ဝိန့်စိန်ရွှေဆိုင် တစ်ဆိုင်တည်းကသာ အောင်မြင်စွာနဲ့ ဖန်းတီး နိုင်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် မြန်မာ့ပန်း(၁၀)မျိုးထဲမှာ ရွှေပန်းတိမ်ဆိုတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုဟာ ရှေးယခင်ကထက် တိုးတက်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ယခုဆိုMyanmar idolမှာ နိုင်ငံတကာနဲ့ ကြည့်ရှူ့ အားပေးနေကြသော ထာဝရ ဝိန့်စိန်က ဖြူ ဖြူ အတွက် ရတနာထည်တွေကို ဘယ်လို ဆန်းသစ် ထားပြီး မှင်သက်ငေးမောမလဲ??? …
အက်စတာ MYANMAR IDOL SEASON4ရဲ့ WINNER ဆုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရသွားပါပြီ
အက်စတာ MYANMAR IDOL SEASON4ရဲ့ WINNER ဆုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရသွားပါပြီ 2019 Myanmar Idol Season4ရဲ့ Winner ကတော့ ပရိတ်သက် တို့ရဲ့အချစ်တော် အက်စတာ ပဲ ဖြစ်သွားပါပီ။ အက်စတာ ကတော့ နှစ်သစ်ကို အောင်မြင်မှု နဲ့အတူ စတင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အက်စတာ MYANMAR IDOL SEASON4ရဲ့ WINNER ဆုကို ထိုက်ထိုက် တန်တန် ရသွားပါပြီ ဘက်ဂျမင်ဆွန်း, အေးမြဖြူ တို့ကတော့ winner ဆုနဲ့ လွဲ ချော်ခဲ့ပါတယ်။ winner ဆုရှင် …
”သားသမီးလိုချင်လျှင် နှင့် ဘယ်သူခွဲခွဲ မကွဲလိုလျှင်” လူသိနည်းသည့် ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်က ”ရှင်မကွဲဘုရား”…..
”သားသမီးလိုချင်လျှင် နှင့် ဘယ်သူခွဲခွဲ မကွဲလိုလျှင်” လူသိနည်းသည့် ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်က ”ရှင်မကွဲဘုရား”….. “ရွှေ တိ ဂုံ ဘု ရား မှ ရှင် မ ကွဲ ဘု ရား ” အိမ် ထောင် ရေး ကိ စ္စ အ ခက် အ ခဲ များ ချစ် သူ ရည်း စား ကိ စ္စ များ အ ဆင် ပြေ စေ ဖို့ ဘယ် သူ ခွဲ ခွဲ တ သက် လုံး လက် တွဲ …
အမေအို အသုံးလိုနေသော ငွေလေး ၂သောင်း ( အချိန် ခဏလေး ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ပေးပါ )
အမေအို အသုံးလိုနေသော ငွေလေး ၂သောင်း ( အချိန် ခဏလေး ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ပေးပါ ) ဒီနေ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာ တစ်ခု တွေ့ခဲ့တယ် ကျမ ဒီနေ့ ဘဏ်သွားတယ် ပိုက်ဆံထုတ်ဖို့ စောင့်နေတဲ့ အချိန် ကျမ နားကို အဖွား တစ်ယောက်လာ ထိုင်တယ်.. လူတွေက ရှုပ်နေတော့ ပိုက်ဆံထုပ်ဖို့ တော်တော် ကြာအောင် စောင့်နေရတယ် အဲ့ချိန်မှာ အဖွားက ကျမ ကို စကား လာပြောတယ် အဖွား ~မြေး ပိုက်ဆံလာထုတ် တာလားတဲ့ ကျမ ~ ဟုတ်ကဲ့ အဖွား … အဖွားသမီး က ပိုက်ဆံ ပို့လိုက်လို့ …
ကမ္ဘောဒီးယား မြန်မာ ပူးပေါင်းရိုက်ကူးမယ့် The Clock 2; The Red Wall ဇာတ်ကားမှာ ပိုင်တံခွန် သရုပ်ဆောင်မည်
ကမ္ဘောဒီးယား မြန်မာ ပူးပေါင်းရိုက်ကူးမယ့် The Clock 2; The Red Wall ဇာတ်ကားမှာ ပိုင်တံခွန် သရုပ်ဆောင်မည် မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံတို့ ပူးပေါင်းရိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားမှာ ပိုင်တံခွန်ကို အဓိကဇာတ်ကောင် နေရာဖြစ်တဲ့ ဂျာနယ်လစ်ကျောင်းသားနေရာကို ရွေးချယ်ရတာဟာ သူဟာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာပါ ကျော်ကြားသူဖြစ်တာကြောင့်လို့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက ဒါရိုက်တာနဲ့ ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်ရှင် Mr.leaj Lydaက ပြောပါတယ်။ သူက ” မြန်မာနိုင်ငံကပရိသတ်တွေသာမက ဒေသတွင်း ပရိသတ်တွေပါ ကြိုက်နှက်သက်မယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခု ဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်ထားပါတယ် ”လို့ ပြောပါတယ်။ မြန်မာလို နံရံလို့ အမည်ရတဲ့ သည်ဇာတ်ကားမှာ အဓိကမင်းသမီးနေရာကို ကမ္ဘောဒီယားမင်းသမီးက သရုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီး အခြားမြန်မာသရုပ်ဆောင်တွေလည်း ပါဝင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ …
မေမေ တွေ က ဆယ် ကျော် သက် အ ရွယ် သ မီး လေး တို့ ကို ပြော ပြ ထား သင့် တဲ့ အ ချက် (၆) ချက်
မေမေ တွေ က ဆယ် ကျော် သက် အ ရွယ် သ မီး လေး တို့ ကို ပြော ပြ ထား သင့် တဲ့ အ ချက် (၆) ချက် သုတေသနတွေအရ အမေနဲ့သမီးတွေကြားက သံယောဇဉ်က တခြားသံယောဇဉ်တွေထက်ပိုပြီး ခိုင်မာတယ်ဆိုတာ သိခဲ့ကြပါတယ်။ သမီးနဲ့စကားပြောနေချိန်မှာ သူ့ခေါင်းထဲမှာဘာတွေတွေးနေလဲဆိုတာကို အမေက သိနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သမီးတွေကိုလည်း ပိုပြီးအချစ်ပိုတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့လိုအချစ်ပိုပြီး မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံဘဲ အစစအရာရာ ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး အရိပ်တကြည့်ကြည့် လုပ်နေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ သမီးလေးတွေကို ဘဝရည်မှန်းချက်တွေကို ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆည်းပြီး ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက် မေမေတို့က …
အတွင်းစိတ် ပုတ်တဲ့သူတွေရဲ့ အမူအကျင့် (၅)မျိုး
အတွင်းစိတ် ပုတ်တဲ့သူတွေရဲ့ အမူအကျင့် (၅)မျိုး လောကမှာ စိတ်ပျက်ဖို့ အကောင်းဆုံးကတော့ စိတ်ထားပုတ်တာပါပဲ။ လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်ကြီးပဲ ချောနေပါစေ၊ ပညာတတ်နေပါစေ၊ စိတ်ထားပုတ်ရင်တော့ အဲဒီ့အရာတွေအားလုံးဟာ အလကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ သူတစ်ပါး ကောင်းစားတဲ့အခါ မနာလိုတတ်တဲ့ အတွင်းစိတ်ပုတ်သူတို့ရဲ့ လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော် (၁) မနာလိုတယ် ဒီလိုလူတွေဟာ အရမ်းမနာလိုတတ်တဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတစ်ပါးက သူတို့ထက် သာလွန်သွားတဲ့အခါ မခံချိ မခံသာဖြစ်ပြီး အတွင်းထဲမှာ မနာလိုစိတ်တွေ ပွားနေတတ်သူပါ။ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာလည်း သူသာ အတော်ဆုံး၊ အလှဆုံး၊ အထင်ပေါ်ဆုံး ဖြစ်သလို တစ်ယောက်ယောက်က ကျော်သွားရင်လည်း သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းကိုတောင် ဖုံးမရဖိမရ မနာလိုတတ်သူတွေပါ။ (၂) အဆင့်အတန်းခွဲခြားတယ် ဒီလိုလူတွေဟာ အဆင့်အတန်း …
ပရိသတ်တွေကို သရုပ်မှန်ချပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲံ The Mask Singer Myanmar ရဲ့နဂါးမျက်နှာဖုံးပိုင်ရှင်
ပရိသတ်ကြီးရေအပတ်စဉ် သောကြာနေ့တိုင်းရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာ စောင့်ကြည့်နေရတဲ့ The Mask Singer Myanmar ပြိုင်ပွဲကြီးဟာ ဒီနေ့မှာတော့ မျက်နှာဖုံးရှင်အသစ်တွေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီ ပရိသတ်ကြီးရေ..။ ပရိသတ်ကြီးခန့်မှန်းတာနဲ့ဆယ်လီစုံထောက်တွေရဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေက မှန်မမှန်ဆိုတာတော့ ဒီနေ့မှာပဲ အဖြေပေါ်ခဲ့ပါပြီ ။ ပရိသတ်တွေအားလုံးသိချင်တေနကြတဲ့ နဂါးမျက်နှာဖုံးပိုင်ရှင် ကတော့ Singer Mother အဖြစ်နဲ့ဘဝကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်ရပ်တည်နေတဲ့ အနုပညာရှင်အဆိုတော် အေသင်ချိုဆွေပဲဖြစ်ပါတယ် ။ အေသင်ကတော့ အနုပညာမောင်နှမတွေနဲ့ ဝေးနေကြတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အပြင်အားလုံးပျော်စေချင်လို့ ဒီအစီစဉ်လေးမှာပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တာပါလို့လည်း ပရိသတ်တွေကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ် ။ အနုပညာမောင်နှမတွေနဲ့လည်းပြန်တွေရတော့ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်လေးတွေလည်း ပြန်တွေးမိတယ်လို့ အေသင်ကပြောပြခဲ့ပါသေးတယ် ။ ပရိသတ်ကြီးရော ခန့်မှန်းတာမှန်ကြရဲ့လား ။ ဆယ်လီစုံထောက်တွေကတော့ ဒီတစ်ခါ စုံစမ်းတာမှန်သွားပြီဆိုတော့ ကျန်နေသေးတဲ့ မျက်နှာဖုံးပိုင်ရှင် နှစ်ယောက်ကို ဆက်လက်ခန့်မှန်းရင်း …
ထိမိတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူ ပိုင်ဖြိုးသု၊ဒေါင်းနဲ့စိုင်းစည်တွမ်ခမ်းတို့ပါဝင်မယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအသစ်
ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ်တွေဟာ တစ်ကားပြီးတစ်ကားထွက်ရှိနေသလို (၂၀၂၀)ရဲ့နှစ်အစမှာလည်း ပရိသတ်တွေကိုဖမ်းစားမယ့် ဇာတ်ကားတစ်ခုကိုကြည့်ရှုခွင့်ရမှာပါ။အဲ့ဒီဇာတ်ကားကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီး စာရေးဆရာမဂျူးရဲ့နာမည်ကြီးဝတ္ထုတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟဝန်ခံချက် ပါ။ ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ ဒါရိုက်တာမီးပွားကရိုက်ကူးထားတာပါ။ဆရာမဂျူးရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း ဒီဇာတ်ကားကိုအကောင်းဆုံးပုံပေါ်လာဖို့ကိုလည်းမျှော်လင့်နေကြတာပါ။အခုဆိုရင် ဒီဇာတ်ကားရဲ့ Official Trailer လေးကတော့ထွက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ ပိုင်ဖြိုးသု၊ဒေါင်း နဲ့ စိုင်းစည်တွမ်ခမ်းတို့ပါဝင်ထားပါတယ်။ ဝတ္ထုထဲကဇာတ်ကောင်တွေဟာ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ သက်နှင်းအိမ်ကပိုင်ဖြိုးသု၊ယုမော်အဖြစ်နဲ့ဒေါင်းဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒေါက်တာအောင်ခန့်အနေနဲ့တော့ စိုင်းစည်တွမ်ခမ်း ကိုတွေ့ရမှာပါ။ယုမော်နဲ့သက်နှင်းအိမ်တို့ရဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းသရုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ Trailer မှာတင် ပရိသတ်တွေရင်ထဲထိရှစေခဲ့ပါပြီ။ Official Trailer ထွက်ရှိတဲ့အချိန်မှာ လူပြောများနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိမိတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူ ပိုင်ဖြိုးသု၊ဒေါင်းနဲ့စိုင်းစည်တွမ်ခမ်းတို့ပါဝင်မယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအသစ်ကို ရင်ခုန်နေကြပြီမဟုတ်လား… Source : မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး,CRD – Cele Gabar UNICODE ထိမိတဲ့သရုပျဆောငျခကျြတှနေဲ့အတူ ပိုငျဖွိုးသု၊ဒေါငျးနဲ့စိုငျးစညျတှမျခမျးတို့ပါဝငျမယျ့ ရုပျရှငျဇာတျကားအသဈ ပရိသတျတှအေကွိုကျတှစေ့မေယျ့ ရုပျရှငျဇာတျကားသဈတှဟော …
“ အုန်းဆီကို အသုံးပြုပြီး ဆံပင် အရှည်မြန်စေမယ့် နည်းလမ်း (၃) ခု ”
“ အုန်းဆီကို အသုံးပြုပြီး ဆံပင် အရှည်မြန်စေမယ့် နည်းလမ်း (၃) ခု ” ညီမလေးတို့…မမတို့ရေ…. အုန်းဆီိကို အသုံးပြုပြီး ဆံပင် အရှည်မြန်စေမယ့် နည်းလမ်း (၃)ခုကို ပြောပေးပါမယ်နော် …။ ဆံပင်ဆိုတာ ဒုတိယ မျက်နှာပါ။ ဆံပင်ရှည်ရှည်လေးနဲ့ လှနေချင်တာကလည်း မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ စိတ်ကူး အိပ်မက်ပါပဲ …။ ဆံပင်ရှည် ဘယ်လောက်ပဲကြိုက်ကြိုက် ဆံပင်က ရှည်မလာတဲ့အခါ စိတ်ညစ်ရပါတယ် …။ ဒီတော့ ဆံပင်အရှည်မြန်ချင်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း အတွက် အခုပြောပြပေးမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေက အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်နော် … နည်းလမ်း (၁) အုန်းဆီ ၂ဇွန်းကို အပူပေးလိုက်ပါ။ ရလာတဲ့ အုန်းဆီနွေးထဲကို သံပုယိုသီး …
This Year : 147012
Total Users : 442145
Total views : 1699997